43 O wee duru m gaa n’ọnụ ụzọ ámá, bụ́ ọnụ ụzọ ámá nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ.+ 2 Ma, lee! ebube+ Chineke Izrel si n’ebe ọwụwa anyanwụ na-abịa,+ olu ya dịkwa ka mkpọtụ nnukwu mmiri;+ elu ụwa nwupụkwara n’ihi ebube ya.+ 3 Ọ dịkwa ka ọhụụ ahụ m hụrụ,+ ya bụ, ọhụụ ahụ m hụrụ mgbe m bịara ịla obodo a n’iyi.+ E nwere ihe ndị yiri ihe m hụrụ n’ọhụụ n’akụkụ osimiri Kiba.+ M wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala. 4 Ebube+ Jehova wee sị n’ọnụ ụzọ ámá nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ bata n’Ụlọ ahụ.+ 5 Mmụọ wee buru m+ bubata n’ogige dị n’ime, ma, lee! ebube Jehova jupụtara Ụlọ ahụ.+ 6 M wee nụ ka otu onye si n’Ụlọ ahụ na-agwa m okwu,+ onye ahụ guzokwa n’akụkụ m.+ 7 O wee sị m: “Nwa nke mmadụ, nke a bụ ebe ocheeze m dị,+ ọ bụkwa ebe ọbụ ụkwụ m zọkwasịrị,+ bụ́ ebe m ga-ebi n’etiti ụmụ Izrel ruo mgbe a na-akaghị aka;+ ụlọ Izrel agaghị emetọ aha nsọ m ọzọ,+ ha na ndị eze ha,+ site n’ịkwa iko ha nakwa site n’ozu+ ndị eze* ha nwụrụ anwụ, 8 sitekwa n’ịrụnye ụzọ mbata ha n’ebe ụzọ mbata m dị, nakwa ịrụnye awara ụzọ ha n’akụkụ awara ụzọ m, ọ bụkwa naanị ahụ́ ụlọ dị n’etiti mụ na ha.+ Ha jikwa ihe arụ niile ha mere metọọ aha nsọ m,+ nke mere m ji were iwe kpochapụ ha.+ 9 Ka ha wepụ ịkwa iko ha+ na ozu ndị eze ha ma debe ha n’ebe dị anya n’ebe m nọ,+ m ga-ebikwa n’etiti ha ruo mgbe a na-akaghị aka.+ 10 “Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, gwa ụlọ Izrel banyere Ụlọ a,+ ka ihere wee mee ha n’ihi njehie ha,+ ha ga-atụkwa ụkpụrụ ya atụ̀. 11 Ọ bụrụkwa na ihere emee ha n’ihi ihe niile ha mere, mee ka ha mara ụkpụrụ Ụlọ a,+ otú e si wuo ya, ụzọ niile e si apụ na ya na ụzọ niile e si abata na ya, ụkpụrụ ya niile na akụkụ ya niile, ụkpụrụ ya niile nakwa iwu niile banyere ya, nọrọkwa n’ihu ha dee ya, ka ha wee gbaso ụkpụrụ ụlọ a niile na ihe e kwuru maka akụkụ ya niile, meekwa ha.+ 12 Nke a bụ iwu banyere Ụlọ a. Elu ugwu ahụ dum nke dị gburugburu ụlọ ahụ bụ ebe kasị nsọ.+ Lee! Nke a bụ iwu banyere Ụlọ a. 13 “Otú a ka ebe ịchụàjà ahụ hà ma a tụọ ya na kubit na kubit,+ otu kubit bụ otu kubit na otu uhiè ọbụ aka.+ Ala ya dị otu kubit. Obosara ya dị otu kubit. Gburugburu ọnụ ya dị otu ntụ ọbụ aka. Nke a bụ otú ala ala ebe ịchụàjà ya hà. 14 Malite n’ala ala ya ruo ná nkebi mbụ nke gbara ya gburugburu dị kubit abụọ, ọ dịkwa otu kubit n’obosara. Malite n’obere nkebi nke gbara ya gburugburu ruo ná nnukwu nkebi nke gbara ya gburugburu dị kubit anọ, obosara ya dị otu kubit. 15 Ekwú ebe ịchụàjà ya dị kubit anọ, e nwere mpi anọ ndị si n’ekwú ebe ịchụàjà ya pịpụta ọnụ.+ 16 Ekwú ebe ịchụàjà ya dị kubit iri na abụọ n’ogologo, kubit iri na abụọ n’obosara,+ akụkụ ya anọ hà nhata.+ 17 Nkebi nke gbara ya gburugburu dị kubit iri na anọ n’ogologo, kubit iri na anọ n’obosara, n’akụkụ ya anọ; gburugburu ọnụ ya dị ọkara kubit, ala ala ya dị otu kubit gbaa gburugburu. “Ebe e si arịgo ya chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ.” 18 O wee sị m: “Nwa nke mmadụ, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Nke a bụ ụkpụrụ ebe ịchụàjà ahụ n’ụbọchị a ga-ewu ya, ka e wee suree àjà a na-esurecha n’ọkụ n’elu ya,+ fesakwa ọbara n’elu ya.’+ 19 “‘Nye ụmụ Livaị bụ́ ndị nchụàjà,+ ndị si n’agbụrụ Zedọk,+ ndị na-abịakwute m+ ijere m ozi, nwa oké ehi si n’ìgwè ehi gị, ka ọ bụrụ àjà mmehie,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.+ 20 Werekwa ọbara ya tee na mpi anọ ahụ, teekwa ya na nkuku anọ nke nkebi gbara ya gburugburu nakwa gburugburu ọnụ ya wee sachapụ ya mmehie,+ kpuchiekwa mmehie ya.+ 21 Ị ga-ewerekwa nwa oké ehi ahụ, nke àjà mmehie, a ga-esurekwa ya n’ọkụ n’ebe ahụ e kwuru ka e suree ya n’Ụlọ ahụ, ná mpụga ebe nsọ ahụ.+ 22 N’ụbọchị nke abụọ, ị ga-akpụta mkpi nke ahụ́ dị mma ka ọ bụrụ àjà mmehie; ha ga-asachapụkwa mmehie dị n’ebe ịchụàjà otú ahụ ha si jiri nwa oké ehi sachapụ mmehie dị na ya.’ 23 “‘Mgbe ị sachapụsịrị ya mmehie, ị ga-eweta nwa oké ehi si n’ìgwè ehi gị, nke ahụ́ dị mma, wetakwa ebule si n’ìgwè atụrụ gị, nke ahụ́ dị mma. 24 Ị ga-eweta ha n’ihu Jehova. Ndị nchụàjà ga-efesakwa ha nnu ma were ha chụọrọ Jehova àjà+ a na-esurecha n’ọkụ. 25 Ruo ụbọchị asaa, ị ga na-eji otu mkpi achụ àjà mmehie kwa ụbọchị;+ ha ga na-achụkwa nwa oké ehi si n’ìgwè ehi, nakwa otu ebule nke si n’ìgwè atụrụ, ndị ahụ́ zuru okè, n’àjà. 26 Ha ga-ekpuchiri ebe ịchụàjà ahụ mmehie ruo ụbọchị asaa,+ ha ga-emekwa ka ọ dị ọcha ma rara ya nye. 27 Ha ga-eme ya ụbọchị ahụ niile. Ọ ga-erukwa na, malite n’ụbọchị nke asatọ+ gaa n’ihu, ndị nchụàjà ga-achụ àjà unu a na-esurecha n’ọkụ na àjà udo unu n’elu ebe ịchụàjà ahụ; ihe unu ga-atọkwa m ụtọ,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.”
^ Ikekwe, ihe ndị a bụ arụsị ndị ha ji mere eze.